Olee otú Gbanwee si Blackberry ka Android
Dị nnọọ ama a ahia-na ndibiat maka gị ochie Blackberry si T-Mobile ma na-achọ jumped mmiri iji Android n'elu ikpo okwu? Ebe ọ bụ na ị na-enweghị echiche banyere ihe dị iche n'etiti abụọ sistem, i nwere ike ka na-uche abụọ. E wezụga na, na-ebufe ọdịnaya site Blackberry ka Android yiri nnukwu ihe ịma aka gị. Kpaliri ke nchegbu? Jiri ya nwayọọ. Ke ibuotikọ emi, m na-aga agwa gị ihe Android iche na Blackberry, otú nyefee Blackberry ọdịnaya gaa na Android, na otú iji Blackberry ngwa, dị ka Blackberry ozi na gam akporo. Chọrọ nyefee data dị ka kọntaktị na ndị ọzọ n'etiti ọ bụla igwe na ihe dị mfe ma dị mma otú ahụ? Isiokwu a ga-agwa gị.
Part 1. Nyefee Data si Blackberry ka Android na 1 Pịa
Part 2. ngwa ọdịnala n'ihi Android na blackberry
Iji mee ka blackberry ka Android transfer, ebe a bụ ike ekwentị transfer ngwá ọrụ ị nwere ike ise nkwado si Wondershare MobileTrans. Ọ na-enyere gị iji weghachite kọntaktị, oku na ndekọ na SMS si Blackberry ndabere faịlụ kere site BlackBerry® Desktọpụ Software V7.0 na V7.1. Mgbe ahụ, ị nwere ike nyefee ndị a faịlụ gị Android ekwentị n'ime 1 Pịa.
Blackberry ka Android Content Nyefee effortlessly
Wondershare MobileTrans-Eme ka ọ nnọọ mfe n'ihi na ị nyefee oku na ndekọ, SMS na kọntaktị site na Blackberry ka Android.
Nyefee na kọntaktị site na Blackberry ka Android enweghị ihe ọ bụla hassle.
Weghachite oku na ndekọ na SMS si ndabere kere site BlackBerry® Desktọpụ Software na nyefe Android.
Na-arụ ọrụ n'ụzọ zuru okè na Samsung, HTC, Sony, LG, Motorola, Huawei, ZTE, Acer na ndị ọzọ Android igwe.
Na-akwado ekwentị ebu - T-mobile, Sprint, AT & T na Verizon.
Dakọtara na Blackberry OS 7 & 10, na mbụ ma BlackBerry® Desktọpụ Software V7 na V10.
Olee otú akwagakwa si Blackberry ka Android
Nzọụkwụ 1. Chọpụta I Nwere Blackberry ndabere
Ọ bụrụ na ị nwere Blackberry ndabere kere site BlackBerry® Desktọpụ Software, biko ịmafere nzọụkwụ. Bụrụ na ọ bụghị, na-eso ya.
Download na wụnye BlackBerry® Desktọpụ Software na kọmputa. Jikọọ gị Blackberry ekwentị gaa na software. Mgbe ahụ, pịa ndabere na-eme ka a na-abụghị ezoro ezo ndabere na kọmputa.
Cheta na: Blackberry 10 smartphones na-akwado ugbu a.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị android na ekwentị na kọmputa na-agba ọsọ nke Wondershare MobileTrans
Download na wụnye Wondershare MobileTrans na kọmputa. Agba ya na jikọọ na gị Android ekwentị gị na kọmputa. Wee pịa "Weghachi si Backups".
Nzọụkwụ 3.-ahọrọ iji weghachi si Blackberry ndabere
Na window, ị pụrụ ịhụ nhọrọ nke ndabere faịlụ ebe ị nwere ike iweghachi ihe ọdịnaya gị Android ekwentị. Họrọ "Blackberry" na-aga.
Nzọụkwụ 3. Nyefee Ndi ana-akpo, Oku dekọọ na ozi ederede site na Blackberry ka Android
Na-ekpe kọlụm, niile ndabere faịlụ i ama mere show elu. Tinye akà rà gị chọrọ otu na họrọ ọdịnaya na ị chọrọ weghachi. Mgbe ahụ, pịa "Malite Copy" na-amalite nyefe. N'oge usoro, ijide n'aka bụghị ịkwụpụ gị Android ekwentị.
Blackberry ngwa ọdịnala n'ihi Android
Android ngwa ọdịnala n'ihi Blackberry
1. Blackberry ozi maka Android
Blackberry ozi, na-aha dị ka BBM, bụ ihe dị egwu ngwa mere site rim. Ugbu a, ọ nwere ihe Android version, otú i nwere ike na-eche na-eji Blackberry ozi na android ekwentị. A na ngwa na-ewetara gị anya na gị ezinụlọ na ndị enyi site nzi ozi, olu ndetu, olu oku, picture nkekọrịta, akwụkwọ na-ekere òkè na ndị ọzọ.
2. Download Blackberry ozi maka Android
Here're ọtụtụ ewu ewu Android ngwa ahịa nke gị download gị chọrọ ngwa. Ebe a, m na-Google Play dị ka ihe atụ. Mepee nchọgharị gị na ọdịda Google Play ụlọ ahịa. Banye na akaụntụ ị na-eji download ngwa. Tinye BBM na search igbe. Ke nsonaazụ ọchụchọ, pịa BBM ịbanye BBM page. Pịa Wụnye iji ibudata ma wụnye gị Android ekwentị.
3. BBM ọzọ ngwa ọdịnala na Android
Ọ bụ ezie na BBM bụ anyaụfụ nke ọtụtụ nzi ozi ngwa, e na ka ụfọdụ ndị magburu onwe ọzọ. N'etiti ha, e nwere WhatsApp ozi, a ozi ngwa maka Android smartphone na ndị ọzọ. Na ya, ị nwere ike ikori na ndị enyi gị na ezinụlọ na ala. Mgbe ị na-enweta ozi, WhatsApp ozi nwere ike ịgbanwee ha na ka ị izipu ozi, audio ndetu, video ozi na photos. Dị mma? Ntak ibudata na-enye ya a ogbugba?
Na mgbakwunye na WhatsApp ozi, ị nwekwara ike gbalịa ndị ọzọ na ngwa ọdịnala n'ihi BBM, dị ka EZIOKWU, WeChat, Facebook ozi, Skype, Viber, wdg
Enweta ihe ozi ngwa ebe a >>
1. Android ngwa ọdịnala n'ihi Blackberry Z10 / Q10
Get Blackberry Z10 na-eche ma Android ngwa ike ga-eji na gị Blackberry Z10? Ee, n'ezie, ị nwere ike iwunye ngwa ọdịnala na gị Blackberry ekwentị mgbe ọ na-agba ọsọ Blackberry 10.2.1. Ebe a, m na-egosi gị otú iji wụnye Android ngwa ọdịnala n'ihi Blackberry Z10 na blackberry Q10.
1.1 ebe-ahụ na android APPS?
Ụzọ dị mfe iji chọta ma wụnye Android ngwa ọdịnala na Blackberry Z10 / Q10 bụ iji-atọ ndị ọzọ na ngwa ahịa, dị ka Amazon AppStore, 1mobile Market, snap APK Downloader, wdg
1.2 Olee otú Wụnye APPS?
Ebe a, m na-achọ ime Amazon AppStore dị ka ihe atụ. Tinye Amazon AppStore peeji na ibudata ya na gị na Blackberry Z10 / Q10, dị ka i na-eme na gam akporo ekwentị. Na gị Blackberry Q10 / Z10, nwee iji wụnye Amazon AppStore na-eso ngwá iji wụnye ya. Mgbe ahụ, abanye n'ime gị Amazon akaụntụ ma chọọ na ibudata gị chọrọ Android ngwa ọdịnala na Blackberry Z10 / Q10. Mụtakwuo >>
2. Android ngwa ọdịnala n'ihi Blackberry PlayBook
Nwere a Blackberry PlayBook na chọrọ igwu Android ngwa ọdịnala na ya? Blackberry PlayBook OS 2.0 nwere atụmatụ Android Player akụrụngwa na-enye gị nweta a dịgasị iche iche nke na-ewu ewu mobile ngwa. Pịa download njikọ ịmụta otú wụnye Android ngwa ọdịnala na Blackberry PlayBook na top 10 ngwa.
Top 10 kasị mma free Android ngwa n'ihi na Blackberry PlayBook >>
Hardware All Blackberry igwe na-mere site rim na ọtụtụ n'ime ha anya yiri. Ruo n'ókè ụfọdụ, a nwere ike ịbụ emezighị emezi, dị ka ha na-enweghị di iche iche. Otú ọ dị, ọtụtụ Blackberry igwe ọnụọgụgụ QWERTY keyboard, nke amasị ọtụtụ ndị ọrụ-amasị na iji kọmputa ede na ya. Tụnyere blackberry, Android ọrụ nwere a dịgasị iche iche nke nhọrọ iji họrọ ihe ha chọrọ n'ezie. Nke ahụ bụ n'ihi Android smartphones nwere ọtụtụ emepụta, dị ka Samsung, HTC, Sony, Motorola, Google, LG, wdg
OS Ọ bụ ezie na Blackberry Z10 bụ zuru touchscreen smartphone, ma ọtụtụ nke ntị reliant na anụ ahụ keyboard. Ọ bụrụ na ị na-elekwasị anya na nkwurịta okwu, Blackberry nwere ike ịbụ na otu onye maka gị. Android emeghe ọdịdị na-eme ka ọ na-anọchi si n'etiti ndị handset ngwaọrụ. Ị nwere mfe ohere ijikwa music, video, photos, kọntaktị na ndị ọzọ na otu eriri USB.
Nweta nkwalite Ọ bụ nnọọ mfe n'ihi na Blackberry igwe na-kwalite. Blackberry eme ka ị nọgide ruo ụbọchị mgbe a ọhụrụ version dị. Oge ọ bụla a ọhụrụ mbipute nke Android abịa si, ụfọdụ ndị ọhụrụ smartphone pụta. Otú ọ dị, ọ bụ adịghị mfe n'ihi na ị na nweta nkwalite gị Android smartphone.You nwere ike na-eche a ogologo oge ruo mgbe emepụta mma ọhụrụ Android.
Ụka n'Ịntanet Blackberry ozi ngwa bụ ihe magburu onwe ngwa na-ahapụ gị kpọtụrụ gị enyi na ndị ezinụlọ site nzi ozi. Blackberry email management-emekwa ka ọ pụta ìhè. Otú ọ dị, n'oge ahụ, ọtụtụ ngwa ọdịnala na yiri ọrụ na-abịa si na Android n'elu ikpo okwu, dị ka WhatsApp, WeChat. Android karịrị echiche na ịkparịta ụka n'Ịntanet. E nwere ọtụtụ mmadụ mgbasa ozi ngwa-enyere gị aka kpọtụrụ anya na ndị ọzọ, dị ka Facebook. Twitter, WhatsApp na ndị ọzọ.
Ngwa Blackberry-enye gị ngwa online center ịzụta ma ọ bụ download ngwa. Otú ọ dị, ọ na-adịghị ebu dị ka ọtụtụ ngwa ọdịnala dị ka Android na-eme. Blackberry-enye gị ngwa online center ịzụta ma ọ bụ download ngwa. Otú ọ dị, ọ na-adịghị ebu dị ka ọtụtụ ngwa ọdịnala dị ka Android na-eme. E nwere ọtụtụ narị puku ndị ngwa ọdịnala na Android Market, dị ka Google Play, AppBrain, wdg site na nke ị nwere ike ibudata ọkacha mmasị gị ngwa.
Batrị Life Blackberry ekwentị nwere oké ndụ batrị, nke nwere ike ịdịru a ogologo oge karịa ndị ọzọ ntị. Gam akporo igwe yiri ka nwere ogbenye ndụ batrị. Ị nwere ike mkpa ana ekwentị gị n'ime ụbọchị nke nkịtị were.
Otú nyefee Blackberry ka Samsung?
Otú nyefee ọdịnaya site Blackberry ka iPhone?
Otú nyefee Data si Nokia ka Samsung?
Olee otú Bugharịa ọdịnaya site iPad ka Samsung?
Olee otú Detuo Data si gam akporo ka Samsung?
Olee otú na-awụlikwa elu ụgbọ mmiri si Android ka iOS?
Otú nyefee ọdịnaya site HTC ka HTC?
Best 5 Download Manager maka gam akporo: Download ọ bụla ị chọrọ na elu Speed
Tọghata AIFF, M4B, M4R ka MP3 maka ebugote ka Google Music
Olee otú ndabere Android Ndi ana-akpo ka Gmail
> Resource> Android> otú nyefee Ndi ana-akpo na SMS si Blackberry ka Android